I-China Ifake I-Silica Yomkhiqizi Wokutshala Imali kanye Nomphakeli | I-Dinglong
I-Silica efakiwe yenziwa nge-silica ephezulu, kusetshenziswa ubuchwepheshe obuyingqayizivele bokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. I-Silica yethu ehlanganisiwe ingaphezu kwama-99.98% amorphous futhi ine-coefficient ephansi ngokweqile yokwanda okushisayo nokumelana okuphezulu nokwethuka okushisayo.
Okuqukethwe cishe okungu-crystalline silica okuqukethwe
I-silica yethu ehlanganisiwe ine-coefficient yokwanda okuphansi ngokweqile futhi ivumela ukwakhiwa kwegobolondo okusheshayo. I-Dinglong fused silica iqinisekisa ukumbozwa okungcono kwamaphethelo nezimbobo ukunciphisa ukuqhekeka kwegobolondo. Iphinde yehlisa intlenga ethangini le-slurry. Yingakho i-silica yethu ehlanganisiwe isetshenziswa kakhulu kunqubo yokukhipha utshalomali ukufeza ukuzinza kwevolumu ephezulu nokususwa kwegobolondo okulula.
IDinglong ikhiqiza imikhiqizo enhlobonhlobo ye-silica namabanga athile womkhiqizo ukuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo zenqubo yokukhipha utshalomali. Onke amabanga wokutshala imali akhiqizwa ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokucophelela ukuze kunikezwe amakhasimende ethu ikhwalithi kanye nokuvumelana okudingekayo ukuze kusebenze inqubo yokukhipha utshalomali.
I-siling ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kumamaki ahlukene kanye nosayizi ohlukahlukene wezinhlayiyana futhi nayo ingenziwa ngezifiso ekucacisweni kwakho. Le mikhiqizo ye-silica ehlanganisiwe ingalungiswa ngezidingo ezithile zohlelo lokusebenza futhi iyatholakala ngama-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Le silica ehlanganisiwe yokusakaza utshalomali yenziwa endaweni eqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica ehlanganisiwe yeMboni Yezobuchwepheshe
Olandelayo: I-Silica ehlanganisiwe yohlelo lokusebenza lokuphikisa